Luuqaddu waa muhiim ee si sax ah u baro! - PDF
Download "Luuqaddu waa muhiim ee si sax ah u baro!"
1 OPPVEKST Luuqaddu waa muhiim ee si sax ah u baro! Talo ku socota waalidka haysta carruur dhawr luuqadood ku kora SOMALI
2 Luuqaddu waa furaha saaxiibbada, wadajirka, iskoolka, aqoonta iyo tayada nolosha. Ilmahaaga u oggolow in uu goor hore af-norwiijiga ku barto xannaanada carruurta, laga billaabo marka uu hal sano gaaro. Guriga marka la joogo ku hadal afka hooyo! Taasi muhiim ayay u noqonaysaa horummarka ilmaha!
3 Ilmuhu laba luuqadood iskumar ma baran karaa? Haa, carruurta dunida oo dhan laba luuqadood ka badan ayay bartaan iyaga oo aan la kulmin dhibaato luuqadeed. Carruurta ku hadasha luuqadaha badan, waxay luuqadda u bartaan si la mid ah sida dadka kale. Cilmibaarista casriga ah waxay sheegaysaa in aan luqadaha ka baran ognahay is dhaqso ahna ubarano wakhtiga aan caruurta nahay (Bialystok, 2001), oo ay carruurtu hal mar isla baran karaan laba iyo in ka badan oo luuqadood. Dadka badankoodu laba ama in ka badan oo luuqadood ayay ku hadlaan taas oo ah khayraad muhiim u ah bulshada iyo qofka laftigiisaba.
4 Luuqadda hooyo iyo af-norwiijiga Ilma kasta waa in uu luuqadda ku barto xawaaraha isaga ku habboon. Carruuruhu waa kala duwan yihiin. Qaar baa degdeg u barta luuqad cusub, meesha ay qaar kale wakhti u baahan yihiin oo laga yaabo in uu jiro wakhti ay iska aammusan yihiin oo ay eegayaan waxa agagaarkooda ka dhacaya. Wakhtigaas oo noqon kara nus sanad, mararka qaarkoodna muddo intaas ka dheer. Inta badan carruurta inta ay fahmayaan ayaa ka badan inta ay ku hadli karaan. Cilmibaaristu waxay muujinaysaa in ay carruurtu luuqadda labaad degdeg u bartaan (halkan: af-norwiiji) haddii ay afkooda hooyo si wanaagsan u yaqaannaan. Luuqaduhu way is caawiyaan. Cilimibaaristu waxay sidoo kale sheegaysaa in ay carruurtu luuqadda ugu baran ogyihiin xannaanada carruurta. Luuqaddee ayay waalidku ku hadlayaan haddii uu afkooda hooyo kala duwan yahay? Waxaa lagu taliyaa in uu waalidku ilmaha kula hadlo afkiisa hooyo. Haddii ay qoysku laba luuqadood ku hadlaan, waxaa habboon in uu qof walba afkiisa hooyo ku hadlo. Waxaa markaas ilmaha u fududaanaysa in uu luuqadna hooyo la xiriiriyo midna aabbe la xiriiriyo. Marka ay qoysku wada joogaanna, waxaa la dooran karaa luuqadda loo arko in ay dabiiciga tahay. Ma wanaagsana in isku hal jumlad dhawr luuqadood laysku daro!
5 Maxaaad ka filaysaa ilmaha barta wax hal luuqad ka badan? Ilmuhu intaanu eray afkiisa ka soo bixin ka hor ayuu billaabaa in uu dadka la hadlo. Sidaas darteedna waa muhiin in ilmaha lala hadlo, inkasta oo aanu ilmuhu erayo kuugu jawaabayn. Sida carruuraha kaleba carruurta luuqadaha badan ku hadasha intooda badan waxay eraygooda ugu horreeya oran doonaan marka ay qiyaastii hal sano jiraan. Marka ay labo sano jiraan intooda badan laba erey ayay isku xiri karaan oo jumlad ka dhigi karaan. Waana mid la mid ah wakhtiyada ay hadlaan carruurta hal luuqad barata. Mararka qaarkood ayay carruurta luuqadaha badan ku hadasha naxwaha isku qasaan ama ereyo labada luuqadood ka kala yimid ku isticmaalaan isku hal jumlad. Arrintani waa mid caadi ah, waxaana keenay baa laga yaabaa in aanay carruurtu weli gaarin in ay labada luuqadood kala saaraan, ama ay eraygii ay rabeen ay labada luuqadood midkood ku soo qaban waayaan. Sidaas darteedna waxay carruurtu isticmaalaan luuqadaha ay yaqaannaan oo dhan. Maaddaama aannu xaaladaha kala duwan luuqado kala duwan ku isticmaalno, waxaa dhacda in carruurta ku hadasha luuqadaha badan ay wixii xannaanada carruurta ka dhacay luuqad ku sheegaan meesha ay waxyaalo kale ku sheegaan luuqadda hooyo. Qaar baa waalidkood luuqad kula hadla, saaxiibbadoodna luuqad kale kula hadla. Waxaa caadiyan la yiraahdaa waxay qaadataa qiyaastii 2 sano in la barto «luuqad maalmeed», barashada «luuqad iskoolna» waxay qaadataa 5-7 sano. Inkasta oo ay saas tahay, waxaan haddana niraahnaa farqi weyn ayaa u dhexeeya dadka kala duwan iyo degdegta ay luuqadda u bartaan. 5-7 sano ayay qaadataa barashada luuqad iskool oo cusub!
6 Maxaan uga jeednaa weerooyinka? Luuqadda hooyo waa afka looga hadlo guriga ilmaha, oo ay labada waalid ama midkood ilmaha kula hadlaan. Hal ilmo wuxuu sidaas darteed yeelan karaa dhawr af oo hooyo. Luuqadda labaad waa luuqadda kale ee la barto ee aan afka hooyo ahayn. Luuqadda dadka tirada badan waa luuqadda ay dadka badankiisu ku hadlaan, dadka dalka deggan (badankiisa). Luuqado badan waa eray guud oo loola jeedo laba- ama in ka badan oo luuqadood. Taas oo laga wado in uu ilmuhu yaqaanno wax ka badan hal af oo hooyo. Laga soo xigtay: Norsk helseinformatikk: Å lære to språk NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring: Barn i flerspråklige familier
7 Sedee ayaad ilmo uga caawin kartaa barashada luuqadda? Waxaa jira habab badan oo ilmaha loo baro wax hal af ka badan, waxaanan halkan idinku soo gudbinaynaa dhawr soojeedimood: 1. Ilmaha la hadal laga billaabo marka uu dhashaba. 2. Waxaa wanaagsan in aad laba luuqadood isticmaashaan haddii ay qoysku dhawr luuqadood ku hadlaan. Carruur badan ayaa yaraantooda isku mar laba luuqadood barta. 3. Guriga ku hadal afka hooyo oo ilmuhu afnorwiijiga ha ku barto xannaanada carruurta. 4. Ilmaha maalintii sii fursado badan oo uu ku maqlo kuna isticmaalo labada afba. 5. U sheekee, isticmaal hees, hees-carruureed oo weliba ilmaha wax ugu akhri labada afba ama afka ay qoysku guriga uga hadlaan. 6. Labada afba muusik ku dhegeyso. Heesiddu waa hab wanaagsan oo afka lagu barto. 7. Ilmuhu ha daawado TV-ga carruurta oo ku hadla labada afba. 8. Ilmuhu waxyaalo kala duwan ha la kulmo. Waxay taasi ilmaha gayeysiin kartaa barashada ereyo badan.
8 Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Tlf:
Gluggen Nr. 4/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Redaktørskifte Nytt samarbeidsprosjekt på Hjeltnes Jolatre og lussekattar Joleverkstad Ein kulturberar blir pensjonist Ved Olav H. Hauge sin
Ku soo dhawaw Midtre Gauldal!
Ku soo dhww Midtre Guldl 1 Ku soo dhww Midtre Guldl! SOMALISK MIYAAD KU CUSUBTAHAY NORWAY IYO WELIBA MIDTRE GAULDAL? Degmd Midtre Guldl wxy soo dhwyys k mid oqoshd d k mid oqoty wxy rejyys i d k helidootid.
Maria Høstmark, Øyvin Kleven og Anne Vedø Lokalvalgsundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrarforeldre 2007 Dokumentasjonsrapport
v Documents 32/2011 O z u.52 ru +» l/l Maria Høstmark, Øyvin Kleven og Anne Vedø Lokalvalgsundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrarforeldre 2007 Dokumentasjonsrapport 1- *-» c V). '
MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE
MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE!! i perioden 1962-2011 "#$%&%'!(&! )*+,($!-*.(//%"%/!!!! 01$%/!2344!!!!! 5/"'6'7''!8*$!97"6##&6'%/"#(:! ;/6&%$"6'%'%'!6!%//%!*::,(&%/A!
JAANTUUS. Qaabka wax loo sawiro. Cinwaan Vunnet Tapt Uavgjort Tilmaamaha kan ugu weyn. Waa tiirka kor ugu haya jiheeyaha.
NORSK SOMALI EKSEMPEL DIAGRAM JAANTUUS Mal Qaabka wax loo sawiro Tabell Cinwaan Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 Søylediagram Tilmaamaha kan ugu weyn 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Øst Vest Nord Stolpediagram
Språkutvikling hos barn Flere veier til målet
Språkutvikling hos barn Flere veier til målet Merete Anderssen & Kristine Bentzen Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Innledning Barn er eksepsjonelt gode til å tilegne seg språk! Språktilegnelse
helsesøstre Tidsskrift for Stille jenter blir modige jenter Selvtillitskurs: landsgruppen av helsesøstre nsf
I DETTE NUMMERET: Utvidet hjemmebesøk Gutter snakker lettere med en mann Tisseskolen Livsstilkurs Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2013 landsgruppen av helsesøstre nsf Selvtillitskurs: Stille jenter blir
Tilegnelse av flere språk samtidig: Fordeler med å være flerspråklig
Tilegnelse av flere språk samtidig: Fordeler med å være flerspråklig Kristine Bentzen & Yulia Rodina CASTL/Institutt for Språk Universitetet i Tromsø Introduksjon: Hvem Hvem er vi? er 2 FLERE SPRÅK TIL